मोबाइलमा भेटिएला त मुना कार्की र विजयको कथा ? « Himal Post | Online News Revolution
मोबाइलमा भेटिएला त मुना कार्की र विजयको कथा ?
प्रकाशित मिति : २०७६, २ फाल्गुन ००:४२
काठमाडौं- पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीको घरमा घटेको विभत्स घटनाले सबैलाई कौतुहल बनाएको छ। सीसीटीभी फुटेज र पोस्ट मार्टम रिपोर्टबाट सशंकित बनेको प्रहरीले यतिबेला मुना कार्की र बिजय चौधरीको मोबाइलभित्र अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
केहि तथ्यहरूले रहस्यमय बन्दै गएको यो घटनाबारे सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन प्रहरीलाई दवाव समेत सृजना भएको छ ।
अनुसन्धानमा जुटेका प्रहरी अधिकारीहरू घटनास्थलमा मुना र विजय चौधरी बाहेक तेस्रो व्यक्तिको प्रवेश नभएकोमा विश्वस्त छन्। घटनाको समयमा घरमा पालेको जर्मन सेर्फड जातको कुकुर पनि घर परिसरमै डुलिरहेको थियो।
“विजयले मुनाको घटना घताएर आफूले आत्मह’त्या गरेकोमा कुनै शंका छैन,” प्रहरी भन्छन, “तर विजयले किन यसो गरे, कारणको खोजीमा हामी जुटेका छौं।’
उनले घटनास्थलबाट बरामद सबुतप्रमाणहरूको प्राविधिक अनुसन्धानका लागि विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाएको बताए ।
अहिले प्रहरीले मुना र विजय दुवैको मोबाइल फोन परीक्षणका लागि प्रयोगशालामा पठाएको छ । “यसबाट थप तथ्य खुल्न सक्ने हाम्रो आशा छ”, प्रहरी भन्छन् ।
प्रहरीका अनुसार विजयको मृत्यु श्वासप्रश्वास बन्द भएकाले र मुनाको मृत्यु गम्भीर चोटका कारण भएको हो। यद्यपि बिहीबारसम्म पाटन अस्पतालले दुवैको पोष्टमार्टम रिपोर्ट भने प्रहरीलाई दिएको छैन।
प्रहरीका अनुसार, २०४८ सालमा अर्जुन र मुनाको विवाह भएको हो। दुवैका तीन सन्तान छन्। दुई छोरी विदेशमा बस्छन्। छोरा भने उनीहरूसँगै थिए।
घटना भएको दिन पूर्वसचिव अर्जुन कार्की बिहान पशुपतिनाथको दर्शनका लागि गए। छोरा स्कूल गएपछि घरमा घरेलु सहयोगी विजय र मुनामात्र थिए।
प्रहरीले कार्कीको घरमा रहेका चार थान क्लोज सर्किट क्यामेरामा कैद दृश्यको विश्लेषणमा त्यो दिन विजयमा केही छटपटी भएको निष्कर्ष निकालेको छ। कार्कीको घरको भान्सा कोठा बाहिर राखिएको क्यामेराले भान्सा कोठाको एउटा भागको दृश्य कैद भएको छ।
घटनाको अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकारीका अनुसार क्यामेरामा कैद भिडियोका अनुसार १० बजेर ८ मिनेटमा मुना किचनमा काम गरिरहेको देखिन्छ। यही समयमा विजय धेरै पटक उनको नजिक ओहोरदोहोर गरेको देखिन्छ।
त्यसको केही समयमा मुना झ्यालतर्फ विपरीत दिशामा फर्किएको बेला पछाडिबाट विजयले डोरीले घाँटीमा बाँधेर मुनालाई भुईंमा लडाएको देखिन्छ। त्यसपछि भान्सामै रहेको पिर्काले उनलाई अन्धाधुन्ध प्रहार गरे। त्यसपछिको १० मिनेटको भिडियोमा केही देखिंदैन। दुवै भुईंमा रहेकाले सीसीटीभीले यसपछि दृश्य कैद गर्न नसकेको हो।
“विजयको मनमा केही योजना भएको उसको हाउभाउले देखाउँछ,” परिसरका अपराध अनुसन्धान शाखा प्रमुख डीएसपी सन्तोष तामाङ भन्छन्, “मुना भान्सामा छिरेपछि पनि ऊ वरिपरि घुमिरहेको दृश्यमा देखिन्छ।”
पूर्वसचिव कार्की ११ बजेर २० मिनेटमा घर फर्कंदा विजय लडिरहेका थिए। उनको वरिपरि रगतले बनाएका पाइतालाका डोबहरू थिए। श्रीमती मुना भान्सा कोठामा रगताम्य थिइन्।
कार्की प्रसादको पोका त्यहीँ फ्याँकेर चिच्याउँदै बाहिर आए। हारगुहार गर्दा केही सेकेण्डमै छरछिमेक भेला भए। कसैले प्रहरीलाई खबर गरे। एकैछिनमा महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुर र महानगरीय अपराध महाशाखाको टोली घटनास्थल पुग्यो।
चिकित्सक सहितको टोली लिएर प्रहरी घटनास्थल पुग्दा मुना गम्भीर घाइते थिइन्। उनलाई तत्काल एम्बुलेन्स मगाएर नजिकैको स्टार अस्पताल पठाएर प्रहरी घटनास्थलको मुचुल्का बनाउन थाल्यो।
प्रहरीले मुना लडिरहेको स्थानमा टुक्राटुक्रा भएका प्लाष्टिकको पिर्का र नाइलनको डोरीको गुजुल्टो फेला पार्‍यो। डाइनिङ हलको टेबलमा केही पैसा, दुईवटा कैंची, एउटा डोरीको सानो टुक्रा लगायत सामग्री पनि फेला परेका थिए। भान्सामा रगतका टाटाहरू यत्रतत्र देखिए।
प्रहरीले विजयको शव मुचुल्कामा उनको घाँटीमा चुँडिएको नाइलनको डोरी फेला पार्‍यो। यस्तै उनको शरीरका अन्य भागमा कुनै चोटपटक थिएन, दुवै घुँडामा बजारिएको जस्तो घाउ र कट्टुमा वीर्य चुहिएको भेटियो।
यस्तै मुनाको टाउकोमा धेरै ठाउँमा घाउ र बायाँ स्तनमा धेरैपटक प्रहार गरेजस्तो चोट देखिएको थियो।
“विजयको भित्री बस्त्रमा वीर्य भेटिएको हो,” प्रहरीले भने, “तर, आत्मह’त्याको अधिकांश घटनामा वीर्य भेटिन्छ।”
प्रहरी परिसर ललितपुरमा २७ माघमा मुनाका पति अर्जुन र २९ माघमा विजयका बुवा जानकी चौधरीले घटनाको अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाइदिन भन्दै जाहेरी दिएका छन्। दुवैले आफन्तको शव बुझेर लगिसकेका छन्।
प्रहरीमा विजयका बुबा जानकीले दिएको जानकारी अनुसार विजय उनका जेठा छोरा हुन्। २४ वर्षका उनी पछिल्लो सात वर्षदेखि सानेपास्थित कार्कीको घरमा घरेलु सहयोगीका रुपमा बसिरहेका थिए। यहाँ बसेको पाँच वर्षसम्म विजय घर गएनन्। त्यसपछि उनी जम्मा तीनपटक दाङको रनियापुरस्थित घरमा पुगेका थिए। पछिल्लो पटक उनी तिहारमा घर गएका थिए।
जानकीले घटनाको केही दिन अघि (२०\_२१ माघ यकिन मिति खुलाउन सकेनन्) विजयले फोन गरेको बताएका छन्। उनका अनुसार विजयले फोनमा मसुरोको दाल र पाँच लिटर तोरीको तेल मगाएका थिए।
“काम गर्न आएपछि सबैभन्दा ठूलो भनेको एकपटक २० हजार रुपैयाँ पठाएका रहेछन्,” विजयका बुवा जानकीको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रहरीले भने, “विजय बसेको कोठा हेर्दा ऊ माथि घरेलु हिंसा भएको संकेत भेटिएन।”
सबै ठीकठाक भए यति क्रुरतापूर्वक उनले किन मुनाको ह’त्या गरे? “हामी कारण खोज्दै छौं,” प्रहरी भन्छन्, “सामाजिक, आर्थिक वा व्यवहारको विषय हुनसक्छ, त्यसको चाँडै यकिन हुनेछ।”